Ukutya Neziselo | Eyekhala 2022
Yeyiphi iwhisky egudileyo yokusela ngokuthe tye?
Uluhlu lwee-whiskeys ezigudileyo ukusela ngqo. Kuquka uluhlu lwee-whiskeys ze-malt ngaphandle kokuluma.
Owona tywala buGqwesileyo ngo-2021
Ukusela iifotsholo kunokuba mnandi kakhulu. Ukuba utyiwa ngokumodareyitha kwaye usasazwe ngengqondo eqhelekileyo (ndiyazi, oku kunokuba nzima kakhulu wakuba uqengqelekile), isibhamu sotywala singenza ukuba kube ngokuhlwa kamnandi, siguqule ubusuku obubandayo bushushu, okanye senze imovie ibenomdla ngakumbi. Ngelixa ungahamba umdala…
I-Tequila ikhawuleze yaba yenye yezona moya zaziwayo, ngezi zinto zili-10 zombini zimnandi kwaye zixabiso.
Izimvo zokuzalwa ezingama-30 zaMadoda-Apho uzokuTheka khona kwaye ubhiyozele
Bhiyozela njengendoda enale mibono ibalaseleyo yama-30 yokuzalwa kwamadoda. Ukusuka kwiindawo zokuhamba ukuya kwiindawo zepati yedolophu, fumana i-adventure emnandi.
Yeyiphi eyona Bourbon ihamba kakuhle? IiBourbons eziSmoothest kwi2021
I-bourbon distillers enkulu kunye nokutshaja ngokutsha inqaku kule ngqokelela yee-bourbon ezili-10 ukuzama ukuntywila ibourbon
Eziphezulu ezingama-50 zeZiselo eziLungele iNdoda yaMadoda-Isikhokelo seBhari yaMadoda
Ngaphambi kokuba ubethe ibha ujonge kwezi ziphuzo ziphambili ezingama-50 zamadoda. Esi sesona sikhokelo sinebha yamadoda esibanzi emhlabeni! Usanxaniwe?
Iimpawu ezi-9 eziphambili zeenkomo zeenkomo zeJerky Wonke umntu kufuneka azame
Ingqokelela ekhethwe ngesandla yeyona nto ingcono ye-9 yeebhrukhwe zeenkomo eziza kwenza umlomo wakho ube ngamanzi. Fumanisa ukulunga okuneziqholo, okumnandi kunye nokutshaya ekufanele ukuba indoda nganye izame.
I-9 yeeNdawo eziPhambili zoPhahla kwiSixeko saseNew York
Isixeko esingaze silale likhaya lezona ndawo zintle zophahla lwendlu ehlabathini. Bamba i-cocktail kwaye wonwabele izimvo.
I-Highland Park yongeza i-Viking ye-Viking ye-Viking Intsingiselo yentliziyo
I-Highland Park yongeze i-malt Scotch whisky kwi-portfolio yayo ngokukhutshwa kwe-Viking Heart eneminyaka eyi-15.
UJim Beam Umnyama Ukhupha uHlelo lweBhotile yeRyder
UJim Beam ukhupha ibhotile yohlelo olunomda kaJim Beam Black Kentucky Straight Bourbon Whisky eyilelwe kuphela iNdebe yeRyder.
I-Glenmorangie eyi-18 yeminyaka indala isungula uHlelo olulinganiselweyo loyilo lweentyatyambo
I-Glenmorangie i-18 Years Old bouquet enevumba elimnandi ikhuthaze ukusebenzisana nomqambi u-Azuma Makoto, kunye noyilo oluncinci lwebhotile yohlelo.
Iimpawu ezili-15 ezilungileyo zeChampagne zokuzama ngo-2021
Njenge-LMFAO, siyayithanda ishawa ye-champagne, ke nazi iibhotile ezilungileyo kakhulu ezili-15 onokuzonwabela xa iqela liqala.
Iindawo eziphambili zeLos Angeles
Akukho nto ibetha ukusela i-cocktail ngombono, kwaye ukuba uku-LA, ezi ziindawo ezilishumi ezilungileyo zokwenza njalo.
IWhisky eNgcono kakhulu yokuZama ngo-2021
I-whisky enevumba iyanda njengoko abantu bejonga ukufumana incasa kunye neencasa ezintsha, ngezi 10 zezona zilungileyo zokuthambisa iitastebuds zakho.
Isikhokelo sakho kwiiNdawo eziLungileyo zeWhisky- Yonke into ekufuneka uyazi
Uphendlo lwakho lweemveliso zewhiskey ezilungileyo luphelile ngesi sikhokelo sithetha ngayo yonke into ekufuneka uyazi. Qhubeka ufunda!
Phezulu kwe-10 yeebarbour zeBarrel ezizodwa zokuzama ngo-2021
I-barrel eyodwa ye-bourbon yiklasi ye-whisky yeprimiyamu apho ibhotile nganye ivela kumgqomo wokuguga endaweni yokuba idityaniswe kunye kuluhlu lwemigqomo eyahlukeneyo yobudala kunye neetshati. I-whisky indala nge-brand's Master Distiller yamaxesha amade kwiibhotile ezizodwa, emva koko ibhotile…
Iinkonzo ezili-10 eziBalaseleyo zokuBhaliswa
Ungayalela nantoni na kwi-intanethi, kubandakanya newayini. Ezi nkonzo zilishumi zibhalisileyo zinikezela ngamaconsi amnandi rhoqo.
Iimvini ezili-10 ezilungileyo zeRosé ukuzama ngo-2021
URose unokuba nobunkunkqele obomvu okanye omhlophe, kodwa iseyincasa emnandi enokonwatyelwa ngabo bonke nakwezinye izinto.
Isikhokelo saBaqalayo: Yintoni iChampagne?
Ukuba umtsha ukuba wonwabe kancinci, nalu ujongo kwimbali ye-champagne nayo yonke into ekufuneka uyazi ukuba yingcali.
Indlela yokuBhiya ibhiya ekhaya-Yonke into ekufuneka uyazi
Inkqubo yenyathelo nenyathelo yokwenza ubhiya ekhaya ngesi sikhokelo somqali. Ibandakanya yonke into oyifunayo malunga nokupheka ibhiya eyenziwe ekhaya.
Ingubo yepati yama-90 yamanenekazi
Intliziyo enomhlaza webhola
yeyiphi ihempe enemibala ehamba neebhulukhwe ze-burgundy
Iitatto zabathandekayo abalahlekileyo babafana